10/03/2018 - Page 3 sur 4 -
Fifamaliana teo amin’ny mpianaka : Rangahy maty novonoin’ny zanak’anabaviny
Rangahy iray antsoina ho Emilson Edmond no namoy ny ainy tany amin’ny distrikan’Ambanja omaly tokony ho tamin’ny 08 ora maraina rehefa novonoina lehilahy iray hatao hoe Anjara Mickael Fridolin, izay tsy iza fa zanak’anabaviny ihany. …Tohiny
Raharaha Houcine Arfa : Niala an-daharana ny mpiaro azy
“Hiala tsy ho isan’ny mpiaro amin’ny raharaha Houcine Arfa intsony izahay”. Izany no teny lehibe sady mafonja nohantintranterin’ny Maître Rajaonarison Santanavalona, izay fantatra fa isan’ny mpiaro azy tamin’ny raharaha nanenjehana an’i Houcine Arfa. Raha tsiahivina …Tohiny
Vaky trano teny Sabotsy namehana : Lehilahy roa tratra am-bodiomby
Mirongatra ny asan-jiolahy miaro fanararaotana miseho eto an-drenivohitra sy ny manodidina tato ho ato. Isan’ny tena nahazo vahana tamin’izany ny vaky trano raha ny kaominina Sabotsy Namehana no asian-teny. Lehilahy miisa roa indray araka izany …Tohiny
Japana-Madagasikara : Tanjona ny hananana toe-karena matanjaka sy maharitra
Miha-mivoatra ny fifandraisan’i Madagasikara amin’ny any ivelany, ary anisan’izany ny firenena Japana. Efa nanomboka ny taona 1960 no efa nanana fifandraisana ara-diplomatika matanjaka narahina fiaraha-miasa maro teo amin’ny sehatry ny ara-toe-karena, ara-tsosialy ho an’ny tanjona …Tohiny